Kyaw Zay Moore – Medium
Kyaw Zay Moore
Covid 19 Third wave or Seasonal flu visit to home?
ခုရက်ပိုင်းအတွင်း covid third wave ဟာ တော်တော်လေးကိုမှ မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးကိုအကြီးအကျယ် ရိုက်ခတ်နေပါတယ်။ စကစကြောင့် ကုသမူမရှိ ဆေးရုံဆရာဝန်မရှိ ကိုးဗစ်စင်တာတွေမရှိတဲ့အပြင် အောက်စီဂျင်ထောက်ပံမူပါ မရနိုင်ကြပဲ လူသေဆုံးမူတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။
facebook newsfeed တခုလုံးလည်း ဖျားနာတာ အနံပျောက်တာ အောက်စီဂျင်ရှာနေရတာ အောက်စီဂျင် ရှူနေရတာနဲ့ နပန်းလုံးနေကြရပါတယ်။ edit post ဆိုပီး အောက်စီဂျင်ရှာရင်းကနေ မသေဆုံးသင့်ပဲ သေဆုံးသွားရတဲ့လူနာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရလို့ အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရလို့မှ မဆုံးသေး ပြီးခဲ့တဲ့ 11 July စနေညမှ ကျွန်တော် စဖျားပါတော့တယ်။
စဖျားဖျားချင်တော့ ပုံမှန်အအေးမိတယ်ပဲထင်ခဲ့ပေမယ် အဖျားက တပတ်နီးပါးထိကြာခဲ့ပြီး covid လား seasonal flu လားကို မကွဲခဲ့ပါဘူး။ ဖျားပီးဆိုတော့လည်း ဘာမှန်းမသိ အသိဆရာဝန်ကို အမေက ဖုန်းဆက်မေးပြီးတော့ပဲ လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေ သောက်ရတော့တာပေါ့။ လူက နဂိုတည်းက တော်ရုံအနံဆို ခံတက်တာမဟုတ် သိတာမဟုတ်ဘူး အဲတော့ အနံပျောက်လား မပျောက်လားလည်း မခံစားတက်ဘူး။ စားစရာရှိတာစား သောက်စရာရှိတာသာ သောက်ပီး နေလိုက်တာ။ အော် ကိုယ်ပြန်ကောင်းမယ်ကျန်ရုံရှိသေး တအိမ်လုံးအဖျားကူးပီး ဖျားကြပါလေရော။ အမေနဲ့တူမလေးရှိနေတော့ ကိုယ်လည်းစိတ်ပူပီး အနည်းဆုံး oximeter လေးတိုင်းတိုင်းထားရင် စိတ်အေးရပါတယ်ဆိုပြီး လိုက်ရှာတာ မတန်မဆစျေးနဲ့ အမြတ်ကြီးစားတွေနဲ့ပဲ တွေ့နေတယ် oximeter တလုံး ၄၂၀၀၀ နဲ့ ဝယ်လိုက်ရတာပဲ။ တအိမ်လုံးကို တနေ့ လေးခါလောက် လိုက်တိုင်းနေပေးလိုက်တော့တယ် တယောက်မှ ၉၀ ၉၅ အောက်မကျလို့‌တော်သေးတယ် ပြောရမယ်။
ခုတော့ တပတ်ကျော်တဲ့ခုနေ့မှာတော့ ကိုယ်ကတော့ လုံး၀အဖျားမရှိတော့ပဲ ကောင်းနေပေမယ် နှာစေးနှာမွန်း လောက်တွေတော့ရှိနေကြပါတယ်။ တအိမ်လုံးဖျားနေတော့ foodpanda ကိုပဲ အားထားပီး ဝယ်စားနေခဲ့လိုက်တယ်။
ခုချိန်မှာ ပြည်သူအားလုံး အချင်းချင်း မရှိတဲ့လူ အကူညီလိုတဲ့လူတွေကို ကူညီရင်း
ရောဂါကူးဆက်မူတွေ ရပ်တန့်သွားအောင် အိမ်ထဲဂရုတစိုက်နေပီးကပ်ဆိုးကြီးမှကျော်ဖြတ်ပြီး ချစ်ရတဲ့သူတွေအားလုံး တူတူပြန်ဆုံနေနိုင်ကြပါစေ။
ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေတောင် ဒုက္ခရောက်နေတာမှ မရှိတဲ့လူတွေအတွက် ကိုယ်ချင်းစားပီး တခါစားအကြံနဲ့ ဆေးဝါး စားသောက်ကုန်တွေ အမြတ်ကြီးစားစျေးတင်မရောင်းကြပါနဲ့တော့။
Crypto currency အဓိကလူသိများတာတော့ bitcoin ပေါ့ သိတာတော့ ကြာပါပြီး မသုံးဖြစ်မလေ့လာဖြစ်ခဲ့ဘူး။ crypto currency အများကြီး ရှိတဲ့ထဲ Bitcoin က တန်ဖိုး အမြင့်ဆုံးမို့လည်း သူက နာမည်ကြီးတာပေါ့ အတက်အကျလည်း ကြမ်းတယ် ပြောရမယ်။
ဟိုတလောကမှ ATM ကနေပိုက်ဆံကလည်း ထုတ်မရ ထုတ်ရခက်နဲ့ ကိုယ်စုထားတာလေးတွေလည်း အလကားအဖြစ်မခံနိုင်နဲ့ လိုက်ကြည့်ရင်း bitcoin မှာဝယ်စုထားမယ် နောက်တော့ ပြန်ရောင်းလို့ရမယ်ဆိုပြီး Binance မှာ စဝယ်ဖြစ်တယ်။
စဝယ်တဲ့ချိန်ကတော့ စျေးတက်နေတဲ့ချိန် ဘုမသိကိုးမသိနဲ့ဝယ်လိုက်မိပြီး စျေးက တပတ်အတွင်းအဝေးစိထိထိုးကျသွားတယ်။ ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပြီ သေချာလေး လိုက်လေ့လာကြည့်မိပီ P2P trade မှာ ကိုယ်ဘဏ်အကောင့်နဲ့ အရောင်းဝယ်လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်လို့ရတာတွေ့လာတယ်။
နောက်တခု ထပ်တွေ့တာကတော့ USDT ဆိုတာ သူကတော့ USD နဲ့စျေးတူတူပဲ ကွာမှ နည်းနည်းပဲ bitcoin BTC လိုလည်း စျေးအတက်အကျ မကြမ်းဘူး ငြိမ်တယ် ပြောလို့ရတာပေါ့ မြန်မာငွေစျေးအတက်ကျပဲရှိတာပေါ့။ အပြင်မှာ dollar ဝယ်စုသလိုပဲပေါ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ binance မှာ USDT တွေမုန့်ဖိုးစုသလို နည်းနည်းချင်း ဝယ်ထားလိုက်တယ်။
Bitcoin BTC စျေးတွေအတက်အကျနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်မလည်းရှာရင်းလေ့လာရင်း နည်းလမ်းတခုက ထပ်တွေ့ပြန်တယ်။ bitcoin ဆိုတာမှာ coin အမျိုးမျိုးရှိတယ် ခုနပြောတဲ့ USDT လိုပေါ့ USDT BTC BNB ETH ဆိုပီ အများကြီးရှိတယ် သူက တခုနဲ့တခုကို convert လုပ်လို့ရတယ် မြန်မာငွေ…
Google Play In App Purchase With Telenor Bill
ခုနေ့ Medium ကစာတွေဖတ်ရင်း တချို့Member ဖြစ်မှ ဖတ်လို့ရတဲ့ စာတွေက တလမှ သုံးခုပဲဖတ်လို့ရတာ ဖတ်ချင်တာတွေ များနေတာနဲ့Member subscription ဝယ်မယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အရင် ကလည်း တလဝယ်ဖတ်ဖူးတယ် အဲတုန်းကတော့ cb card နဲ့ပဲ ဝယ်လိုက်တယ် ခုလည်း ဝယ်မယ်ပေါ့ ကြည့်လိုက်တာ google play in app purchase မှာ telenor bill ကိုသွားတွေ့မိတယ်
မဆိုးဖူးပေါ့ payment card ထည့်သုံးထားရတာထက်တော့ စိတ်ချရတယ် မတော် လျှောက်နှိပ်မိရင် card ထဲက ကပိုက်ဆံတွေ အကုန်ဖြတ်နေမှာကို ဖုန်းbill ကကျ သုံးထောင်ထက်တောင် ပိုရှိဖူးတာမဟုတ်ဖူး အဲဒါနဲ့စမ်းလည်းစမ်းချင်တာနဲ့ဖုန်း bill တသောင်းချက်ချင်းဝယ်ဖြည့်ပီး subscribe လုပ်တာတာ အဆင်ပြေပြေချော့ချော့မွေ့မွေ့ပဲ နောက်ဆို google play in app purchase ကို telenor bill နဲ့လူတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရတာပေါ့ တချို့ကျ payment card မရှိကြတာများတယ် ခု တော့ Medium က ဖတ်ချင်တဲ့ဟာတွေ ဆက်ဖတ်လိုက်အုံးမယ်
How to host ASP.NET website on IIS?
ဒီ post လေးကတော့ Junior Level တွေ အတွက်ရည်ရွယ်တာလေးဖြစ်ပါတယ်။ .Net Junior Developer အများစုက ရေးနိုင်ပေမယ် ကိုယ်ရေးထားတဲ့ app ကို အရင်ဆုံး localhost မှာတင် IIS နဲ့ဘယ်လို host လို့ရမယ်မှန်း မသိကြတာများပါတယ် အဲအတွက် လေ့လာစမ်းချင်တဲ့ junior level တွေကို ရည်ရွယ်ထားတာပါ။
IIS ရဲ့ အရှည်ကောက်ကတော့ Internet Information Services ပါ့ web server တမျိုးပေါ့ ကျနော်တို့ ရေးတဲ့ ASP.Net application တွေဟာ IIS ပေါ်မှာပဲ run တာပါ။ php ဆိုရင် apche server ပေါ်မှာ run တာပေါ့ အဲလိုမျိုး language ပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲတာပါ။ IIS ကတော့ Window OS တွေမှာ ပါပြီးသားပါ programs and features ကနေ ထပ်ဖွင့်ပေးရုံပါပဲ။
How to turn on IIS?
Window မှာ IIS တွေက ဖွင့်ထားပြီးသားမရှိပါဘူး program and feature ကနေ သွားဖွင့်ပေးရပါတယ်။ အရင်ဆုံး ကိုယ်စက်ထဲမှာဖွင့်ပြီးသားလား သိရအောင် Run >>ကနေ inetmgr ရိုက်ဖွင့်ကြည့်ပါ error ပဲ တတ်လာရင်တော့ မရှိသေးပါဘူး ကျနော်တို့ window search box ကနေပဲ programs and features…
Hi, I’m Kyaw Zay Moore, most people know as FiDO. Software Engineer. http://kyawzaymoore.com